Misaona ilay Indiana mpiaro vehivavy Kamla Bhasin i Azia Atsimo · Global Voices teny Malagasy
"Hanohy hanome aingam-panahy ho antsika ny hirany, ny hiakany ary ny asa sorany"
Voadika ny 07 Oktobra 2021 4:36 GMT
Kamla Bhasin nandritra ny TEDx MSIT. 2017. Sary tao amin'ny Flickr avy amin'ny TEDx MSIT. BY NC-ND 2.0.
Namoy ny ainy tamin'ny Asabotsy 25 Septambra 2021 tao New Delhi, India i Kamla Bhasin, mpisavalalan'ny hetsika zon'ny vehivavy any Azia atsimo. 75 taona izy ary voan'ny homamiadana volana vitsivitsy talohan'izay. Fantatra amin'ny maha-feminisita, mpanoratra, mpikarakara, mpanao fihetsiketsehana, lahika ary mpahay sosialy izy. Heverina ho iray amin'ireo mpampiofana miralenta mendrika indrindra ao amin'ny faritra izy ary olomangan'ny zon'ny vehivavy. Nandritra ny dimampolo taona niasany teo amin'ny sehatry ny zon'ny vehivavy, ny fampivelarana ny olombelona, ​​ny fandriampahalemana sy ny demaokrasia, nampiofana sy nanome aingam-panahy ho an'ireo feminista an'arivony maro manerana ny firenena Aziatika Tatsimo maro izy. Nahatsiaro azy tao amin'ny media sosialy ireo mpikatroka ary nisaona ny fahafatesany.
Nisaona an'i Kamla Bhasin tao amin'ny Twitter i Khushi Kabir, mpikatroka zon'olombelona Bangladeshita:
Nandao ity tany ity tamin'ny 2.45 maraina ilay malala namantsika indrindra, kamaradintsika, olombelona tsara tarehy indrindra, Kamla Bhasin. Fantatra fa voan'ny homamiadana izy telo volana androany izay. Rehefa nahakasika fiainan'[olona] marobe tamin'ny fomba tena miabo, mbola miaina ao amintsika sy eo amintsika hatrany i Kamla. Mitsangàna amin'ny hery, Kamla
Dimam-polo taona niasana tamim-pamirapiratana
Teraka tamin'ny 24 aprily 1946, tao amin'ny tanànan'i Shaheedanwali any Pakistan amin'izao fotoana i Kamla Bhasin ary nifindra tany Rajsthan ny fianakaviany nandritra ny fisamasamahan'India tamin'ny taona 1947. Nahavita ny mari-pahaizana master tao amin'ny Oniversiten'i Rajasthan izy ary nankany Alemaina Andrefana tamin'ny faramparan'ny taom-polo 1960 niaraka tamin'ny mpiray taranja iray mba hianatra momba ny sosiolojian'ny fampivelarana ary taty aoriana niasa ho mpampianatra tao Bad Honnef. Taorian'ny niverenany tany India tamin'ny taona 1970, nanomboka niasa ho mpiasan'ny fampandrosoana sady mpikatroka tao amin'ny Seva Mandir, ONG=FTMF ifotony iray ao Udaipur izy. Taorian'izany dia niditra tao amin'ny Sampan'ny Firenena Mikambana momba ny Sakafo sy ny Fambolena (FAO) izy ary nandray asa voalohany momba izany tao Bangladesh tamin'ny taona 1976 mba hiara-miasa amin'ny Gonoshasthaya Kendra, fikambanana misahana ny fahasalamam-bahoaka any ambanivohitra. Ampolony taona vitsivitsy manaraka izany, ny fikarakarana programa fanamafisana fahaiza-manao, ny famantarana ireo asa fampivelarana vaovao any amin'ny firenena Aziatika ary famoronana tambajotra eo amin'ny olona any amin'ny firenena maro any Azia atsimo no asany amin'ny ankapobeny.
Nahatsiaro ireo endrika maro momba an'i Bhasin i Shobha Raghuram, mpanadihady momba ny fampandrosoana avy any Bangalore:
Feminista, filozofy, mpitsikera kolontsaina, poeta, mpanoratra, mpitarika, mpanorina fihetsiketsehana, Be fitiavana, tena olombelona hatrany amin'ny fakany lalina i Kamla Bhasin, laika amin'ny finoany, miloabava amin'ireo tsy rariny, mpikambana manana ny lanjany amin'ny fiarahamonim-pirenena, diso malalatanana amin'ny fotoanany sy ny fitiavany tsy ho hita intsony.
Malaza amin'ny asany miaraka amin'ny Sangat, tambajotra feminista Aziatika atsimo izay nivoaka avy tao amin'ny Sangat Month Long Course (taranja fanamafisana fahaiza-manao ho an'ny vehivavy momba ny miralenta, ny fivelomana maharitra, ny zon'olombelona ary ny fandriampahalemana) i Bhasin tao anatin'ny asany tao amin'ny FAO. Namolavola ny fahaizan'ireo vehivavy mpikatroka an-jatony maro avy amin'ny firenena Azia atsimo nandritra ny taona 1980s sy 1990s i Sangat. Nitsangana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 1998 nandritra ny atrikasan'ny mpampiofana momba ny lahy sy ny vavy, natao tany Bangladesh sy nokarakarain'ny Programa FAO-ONG ny Tambajotra Sangat. Niala tamin'ny asany tao amin'ny FAO i Bhasin tamin'ny taona 2002 ary niditra ho mpanolo-tsainan'ny Tambajotra Sangat mba hanohizany ny asany. Nifandray ireo mpianatra maintimolaly tamin'ny fampianaran'ny Sangat manerana an'i Azia atsimo, ary mandray anjara amin'ny fiaraha-miasa sy hetsika miampita sisintany isa-taona. Tarihan'ny Jagori, fikambanana feminista niarahana nanorina tamin'i Bashin tamin'ny taona 1984 ny tambajotra amin'izao fotoana.
Nitàna andraikitra lehibe tamin'ny fanatontosana ny hetsika manerantany One Billion Rising amin'ny maha mpandrindra an'i Azia atsimo azy ihany koa i Bhasin.
Hita tamin'ny resadresaka marobe sy lahateny TEDx nanerana an'i India i Kamla Bhasin. Ity misy lahateny iray toy izany nandritra ny TEDxDurbarMarg tamin'ny herintaona:
Manoratra indray ny hiran'ankizy sy ny teny filamatra Azadi
Nanoratra boky 19 mahery sy fitaovana fampianarana marobe amin'ny fahatakarana ny fanjakazakan'ny lahy sy ny miralenta i Kamla Bhasin, nadika tamin'ny fiteny am-polony ny sasany amin'izany. Tamin'ny taona 1980, rehefa nividy boky hiran'ny ankizy ho an'ny zanany izy, dia tohina tamin'ny fampiheverana sy ny fampidirana ny fanjakazakan-dehilahy tamin'ny ankamaroan'ny boky, izay milaza fa mandeha miasa ny raim-pianakaviana ary mijanona ao an-trano mahandro sakafo sy mikarakara ny ankizy ny renim-pianakaviana, ary mandeha mianjoria ny ankizilahy ary ilaozany ny ankizivavikely.
Ka nanoratra hiran-jaza nitaratra ny tokantrano maoderina i Bhasin, izay nilaza ireo tantaran'ny renim-pianakaviana miasa sy ny zatovovavy mandeha manao fanatanjahan-tena tahaka ny lehilahy. Namoaka ireo hiran-jaza ireo tamin'ny boky mitondra ny lohateny hoe “Asan'ny Rehetra ny Asa An-tokantrano-Hira ho an'ny Fianakaviana Marina sy Sambatra,” izy izany nadika tamin'ny fiteny maro.
Tena malaza eo amin'ireo mpikatroka ny iray amin'ireo tononkalony, “Satria Zazavavy aho, tsy maintsy mianatra,” izay manipika ny filàna fanomezan-kery ny vehivavy amin'ny alalan'ny fampianarana. Misioka i Sruthi Kalyani hoe:
Tsy haiko ny manazava fa tena misy dikany amiko ity tononkalo ity. Manan-javatra maro tokony atao isika. Tsy maintsy mianatra isika.
Malaza dia malaza teo amin'ireo mpikatroka ary nampiasaina tamin'ny fihetsiketsehana ara-tsosialy sy ara-politika isan-karazany ny iray amin'ireo teny filamatr'i Bhasin azadi (fahafahana amin'ny fiteny Urdu). Tamin'ny taona 1984 izy no nahare voalohany ny hiaka mitady azadi teo amin'ireo feminista tany Pakistan, izay nanohitra ny fitondrana Zia-ul-Haq. Nahazo aingam-panahy izy ka nanoratra tononkalo ary nampalaza ilay hiaka tao India, ary naseho tamina sarimihetsika Bollywood iray izany.
Mpikatroka Anjali Bhardwaj misioka hoe:
Niala tamin'ny vatany i Kamla Bhasin tsy manam-paharoa. Saingy hanohy hanome aingam-panahy sy tanjaka ho antsika amin'ny tolona ataontsika ho an'ny tontolo anjakan'ny hitsiny sy ny rariny kokoa hatrany ny hirany, ny hiakany ary ny asa sorany. Mialà sasatra am-pahefana, Kamla!
Nahakasika fiainana maro izy
Mahatsiaro ny asany sy ny fomba nanohinany ny fiainan'ny olona ireo mpikatroka manerana an'i Azia atsimo. Nanampy tamin'ny fampifandraisana ireo mpikatroka avy any India, Pakistan, Bangladesh, Nepal ary Sri Lanka tamin'ny alàlan'ny asa fampiofanana nataony tao amin'ny Tambajotra Sangat i Bhasin.
Nadia Agha, mpikatroka Pakistaney nisioka hoe:
Andro mampalahelo ho an'ny vehivavy manerana ny Atsimo ankapobeny ny androany. Nodimandry i Kamla Bhasin, mpahay siansa ara-tsosialy, mpikatroka feminista sy loha laharana amin'ny hetsiky ny vehivavy ao India. Aingam-panahy ho an'ny tanora feminista maro amin'izao fotoana izy, anisan'izany aho. Mialà sasatra am-pahefana
Niaiky ny fandraisan'i Bhasin anjara ny Vaomiera mpiaro ny zon'olombelona ao Pakistan:
Olom-pirenena Aziatika Tatsimo amin'ny tena dikan'ilay teny i #KamlaBhasin. Naneho ny sasantsasany tamin'ireo soatoavina ankamamin'ny HRCP izy: ny tolona hiarovana ny foto-kevitra demaokratika, ny fanoherana ny patriarsia, ary ambonin'ny rehetra izany ny herin'ny vondrom-piarahamonina hihetsika hiaro ny zon'izy ireo.
Mpihira sady mpanao gazety Bangladeshita Elita Karim mahatsiaro an'i Bhasin:
Andro mampalahelo androany.
Hiaina amin'ny alàlan'ny asanao ianao, ny tsikinao, ny fahatsaran'ny fonao ary ny hafanam-ponao hijery ny olona mitsangana, hiangana sy hanao zavatra betsaka kokoa.
Miarina ho an'i Kamla Bhasin tokana! Handry am-piadanana anie ianao
Nolavin'i Bhasin ny hevitra fa foto-kevitra tandrefana fotsiny ny feminisma, nanitrikitrika izy fa miorim-paka amin'ny tolona sy ny fahorian'ny vahoaka any amin'ny firenena samihafa izany. Nohamafisiny fa ny tolona ho amin'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy dia tsy ady eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy, ary mitàna ny heviny fa manimba ny lehilahy ihany koa ny patriarsia satria manimba ny maha-olona azy ireo sy mampijaly azy ireo izany. Raha ny filazany, na eo aza ny fandrosoan'ny vehivavy any Azia atsimo dia hidaraboka izy ireo noho ny zavatra telo: ny patriarsia kapitalista, ny politika elatra havanana ary ny fondamentalisma ara-pivavahana.
Mpanoratra Pakistaney sady feminista Maria Rashid nisioka hoe:
Kamla Bhasin- tranom-pahefan'ny fitiavana, firaisankina & hetsika feminista miampita sisintany. Tian'ireo feminista zandriny sy zokiny kokoa ao Pakistan, ao India, ao Srilanka, ao Bangladesh ary ao Nepal ianao. Hitanay ianao, renay ianao, miara-mihira aminao izahay- mbola miaraka aminay ianao. Mialà sasatra am-pahefana Kamla ji
Pakistana 5 andro izay